Wararka - Noocyada alaabta guryaha lagu banneeyo waxay dardargelinayaan xawaaraha qaabeynta warshaddeena
Noocyada alaabta guryaha lagu banneeyo waxay dardargeliyaan xawaaraha qaabeynta warshaddeena
Dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha macruufka iyo kororka heerka dhex-galka ee ganacsiga elektaroonigga ah, suuqa alaabta dibadda ee Shiinaha ayaa noqda mid caan ku ah. Warbixinta kormeerka ee dhawaan la soo saaray ee Xarunta Cilmi baarista xogta dhoofinta Shiinaha ayaa muujineysa in qeybtii hore ee sanadkan, mugga macaamilka ee qaddarka dhoofinta Shiinaha uu aad uga badan yahay sanadkii hore
Muuqaalka lacagta qurxoon ee suuqa alaabta dibada ee Shiinaha ayaa soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee adduunka. Ragaani caalamiga ah waxay dardar geliyeen xawaaraha qaabeynta ee Shiinaha, miisaska isku laabanna banaanka kama reeban.
Dad aad u tiro badan oo jecel miiska foorarsiga fudud, waxay isticmaashaa mid aad u fudud .Ku dhowaad dadka caanka ah waxay leeyihiin hal miis oo isku laaban sida wax soosaarka warshadeena. miis iyo kursi.
Sannadkan, waxaan iibsannaa 3 mashiinno wax lagu duubo oo afuufay oo waxaan kireysannay 2 naqshadeeye sare oo ku biira kooxdayada horumarinta. Marka hadda waxay ku kordhisay awoodda wax soo saar 50% marka loo eego waagii hore
Ku kalsoonow miiska cusub ee isku laaban caagga iyo kursiga ayaa si dhakhso leh suuqa u soo gali doona
Waqtiga boostada: Nofeembar-16-2020